Akwụkwọ Ozi Si n’Aka Òtù Na-achị Isi | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2017
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Japanese Sign Language Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Ossetian Polish Polish Sign Language Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
Ihe dị ka puku afọ abụọ na narị afọ isii gara aga, e gosiri Ezikiel otu ọhụụ dị egwu. N’ọhụụ ahụ, ọ hụrụ nnukwu ụgbọ ịnyịnya na-agba n’eluigwe. Ọ bụ Ọkaakaa Eluigwe na ụwa na-anya ya. Otu ihe dị ịtụnanya banyere ụgbọ ịnyịnya a bụ otú o si agba. Ọ na-agba oké ọsọ, jirikwa oké ọsọ ahụ na-agbanwe ebe ọ na-aga n’ebughị ụzọ tụgharịa ma ọ bụ kwụsịtụ.​—⁠Ezik. 1:​4, 9, 12, 14, 16-27.
Ọhụụ ahụ na-eme ka anyị ghọta na nzukọ Jehova n’eluigwe na-aga n’ihu n’ihu. Oleekwanụ maka nzukọ ya n’ụwa? Ihe ndị mere n’afọ ije ozi gara aga gosiri na Jehova na-eme ka ndị ohu ya a haziri nke ọma n’ụwa na-agakwa n’ihu n’ihu n’ụzọ n’enweghị atụ.
Nzukọ Jehova na-aga n’ihu n’ihu
Dị ka ihe atụ, ọrụ na-aga n’ihu n’ike n’ike n’Amerịka ebe a. Ndị ezinụlọ Betel si na Bruklin na-akwaga n’isi ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị dị na Wọwik nke dị na Niu Yọk, nakwa n’ụlọ ọrụ anyị ndị ọzọ n’Amerịka. E nwekwara ndị nke e zipụrụ ka ha gaa kwusawa ozi ọma. Ụmụnna ndị na-arụ n’alaka ụlọ ọrụ ndị ọzọ jikwa ezigbo ọrụ n’aka. Ụfọdụ na-arụ ụlọ ndị ọhụrụ anyị ji eme ihe gbasara ofufe Chineke ma ọ bụ na-arụzigharị ndị nke ochie. E nwekwara ndị nke e mechiri alaka ụlọ ọrụ ha, ma ziga ha n’alaka ụlọ ọrụ ọzọ. Gịnwa kwanụ? Ọ bụrụgodị na i sibeghị otu ebe kwaga ebe ọzọ n’ihi ozi Chineke, e nwere ụzọ ndị ọzọ i si na-arụsi ọrụ ike n’ozi Chineke.
Obi dị Òtù Na-achị Isi ụtọ maka otú ụmụnna anyị n’ụwa niile si na-arụsi ọrụ ike ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ, nakwa maka mbọ ha na-agba iso nzukọ Jehova ụkwụ na ụkwụ. Ọtụtụ ndị akwagala ebe a chọkwuru ndị na-ekwusa ozi ọma. Ndị ọzọ amụọla asụsụ ọzọ ma jiri ha na-ekwusara ndị na-asụ asụsụ ndị ahụ ozi ọma. Ọtụtụ ndị amụọkwala ụzọ ndị ọhụrụ e ji ezi ozi ọma ma jiri ya na-ekwusa ozi ọma. E nwekwara ndị si n’ụzọ ndị ọzọ dị iche iche na-ejekwuru Jehova ozi. Ụmụnna anyị niile, ma ndị agadi ma ndị ahụ́ na-adịghị, ji obi ha niile na-agba ọsọ ndụ ahụ. Ha niile na-aga n’ihu n’ihu n’ozi Jehova ma na-agba Setan n’anwụ na ọ bụ onye ụgha.​​—⁠1 Kọr. 9:⁠24.
Biko, maranụ na Jehova na-ahụ mbọ niile unu na-agba n’ozi ya. (Hib. 6:10) Otú unu si ewepụta onwe unu na-ejere ya ozi na-echetara anyị ihe Ebreham na Sera mere. Mgbe Ebreham dị ihe dị ka afọ iri asaa na ise, ọ kpọọrọ ndị ezinụlọ ya si n’obodo ndị Kaldia mepere emepe a na-akpọ Ọọ gawa obodo Kenan dị ezigbo anya ma birizie n’ụlọ ntu. O biri n’ụlọ ntu otu narị afọ tupu ya anwụọ. Ebreham na nwunye ya ji obi ha niile rubere Chineke isi.​—⁠Jen. 11:31; Ọrụ 7:​2, 3.
Ị̀ na-eme ka Ebreham na Sera? Unu niile ndị ji obi unu na-ejere Chineke ozi n’agbanyeghị nsogbu unu na ha na-alụ na-eme ihe ahụ Jizọs gwara anyị niile ka anyị na-eme. Ọ sịrị: “Gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m. Na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ.”​—⁠Mat. 28:⁠19.
Ihe a Jizọs kwuru nke bụ́ “gaanụ” gosiri na anyị ga na-aga n’ihu, ya bụ, na anyị ga na-arụsi ọrụ ike. Obi dị anyị ụtọ ịhụ ike anyị niile bụ́ ndị na-eso ụzọ Kraịst kpara n’afọ gara aga. O doro anya na Jehova ji aka ya dị ike na-agọzi ozi ọma Alaeze anyị na-ekwusa ná mba niile.​—⁠Mak 13:⁠10.
Ọtụtụ ndị na-anabata ozi ọma anyị na-ekwusa. N’afọ gara aga, ọnụ ọgụgụ ndị nkwusa anyị nwere dị nde asatọ, narị puku atọ na puku iri anọ, narị asatọ na iri anọ na asaa, ndị anyị mụụrụ Baịbụl kwa ọnwa dị nde iri, otu narị puku na puku iri na ise, narị abụọ na iri isii na anọ. N’eziokwu, ụgbọ ịnyịnya ahụ na-aga n’ihu n’ihu, i sokwa ya na-aga. Akwụsịla ọrụ ọma ị na-arụ n’ozi Jehova n’obere oge a fọrọnụ tupu Jehova emechie ụzọ nke nzọpụta.
Ọ bụ ya mere na isiokwu afọ 2017 dabara adaba. Isiokwu ahụ bụ, “Tụkwasị Jehova obi, na-emekwa ihe ọma.” (Ọma 37:⁠3) Ọ bụrụ na unu ana-ejere Jehova ozi dị nsọ, ọ na-egosi na unu na-eme ihe ọma nakwa na unu tụkwasịrị ya obi. Biko, unu echefula na Jizọs kwụ anyị na-azụ. Ọ ga-emere anyị ihe a o kwere ná nkwa. Ọ sịrị: “Lee! m nọnyeere unu ụbọchị niile ruo ọgwụgwụ usoro ihe a.”​—⁠Mat. 28:⁠20.
ISIOKWU AFỌ 2017:
Ka obi sie unu ike na Jehova ga na-agọzi ozi unu ji obi unu niile na-ejere ya. Ihe ka Jehova mkpa abụghị otú ihe anyị na-eme n’ozi ya hà, kama ọ bụ ma ànyị ji obi anyị niile na-eme ihe niile anyị nwere ike ime n’ozi ya. Obi na-atọ ya ụtọ ná mbọ niile anyị na-agba n’ozi ya, ọ ga-agọzikwa anyị. (2 Kọr. 9:​6, 7) N’ihi ya, akwụsịla ịna-ekpechi ekpere anya, ịna-amụchi Baịbụl anya, ịna-agachi ọmụmụ ihe anya, nakwa ịna-agachi ozi ọma anya. Ime ihe ndị a ga-eme ka anyị na-abịaru Nna anyị hụrụ anyị n’anya nso.
Ekwensu eforola ntutu taa na tupu ‘oge ahụ dị mkpirikpi’ fọọrọ ya agwụ, na ya ga-esi ụzọ ọ bụla mee ka anyị kwụsị irubere Jehova isi. (Mkpu. 12:12) Ọ bụrụ na anyị anọrọ Jehova nso, mbọ Ekwensu na-agba ga-akụ afọ n’ala. (Ọma 16:⁠8) Maranụ na anyị hụrụ unu n’anya. Obi dịkwa anyị ụtọ otú unu si enyere anyị aka n’ịrụ ọrụ ndị gbasara Alaeze Onyenwe Anyị n’oge ikpeazụ a.